Fumana Izwe LeNtshona Ukudansa
Ukudansa kwelizwe kwenziwa lula
Eyaziwayo ngokuthi "ukudansa ngokukhabela" ngeTyans, ukudansa kwelizwe kubhekisela kwiindlela ezahlukeneyo zokudanisa, izakhono, kunye nokuhamba okusekwe kumculo welizwe langasentshona. Izwe nabasemadlalweni abasentshonalanga basebenza kwilizwe langasentshonalanga yemizila yokudanisa, iiklabhu kunye neendawo zokudlala. Ukuba uyakuvuyela ukuphulaphula umculo welizwe langasentshona okanye umculo welizwe - kwaye ugqoke iibhokhwe zeenkomo, ngokuqinisekileyo-unokufumana ukukhaba kwelizwe langasentshona ukudansa mhlawumbi.
Gcina ukhumbule ukuba kuhluke kunokudansa kumculo welizwe. Sithetha ngodaniso lomgca ekugqibeleni.
Amaziko aseDancing Dancing
Umdaniso welizwe kunye nasentshonalanga ungaphulwa kwiindidi ezimbini: iqabane kunye neendibano zomdaniso. Iidaniso zomlingani ziquka zombini zikhokelo kwaye zilandele udaniso (apho iqabane elinye likhokelela kwaye elinye lilandela) kunye nemidaniso yeprothem. Iidaniso zeqela ziquka ukudansa kwemigangatho kunye nemidaniso yesikwele.
Eyaziwa ngokuba yindlela yokungaqhelwanga engaqhelekanga kunye nekhululekile yomdaniso, ukudansa kwelizwe akuthethiwanga ukuba yi-sloppy. Abadansi belizwe bagxininisa ukuthobeka kumgangatho wokudanisa, kwaye bahlala behlawula okanye bahamba phantsi emdeni womdaniso. Ezinye izinyanyiso zixakile. Uninzi lweentshukumo ze-hip ludangelekile, njengokuba lugxotha okanye ludlulela ngexesha lomculo. Khangela la macebiso okuqala okudansa.
Emva kokuba uqale ukufunda ukudansa kwelizwe, mhlawumbi uqala ngokufunda uhamba njengezinyathelo ezimbini. Ukusuka apho, kulula ukuba ungene kwi-pretzel, i-dip dip, kunye nomthandi.
Ukuhamba phambili kuquka ukuwa kwetrust kunye ne-backflip. Ukuhamba kungabonakala kufana nokudansa komgca, kodwa iimbini zokudanisa zihluke kumgca wokudanisa. Umdaniso womgca ulandela iipateni ezahlukileyo kunye nomdaniso oqoshiwe kunye nabantu abahamba emigqeni okanye emigqeni xa bejongane. Abafaki ukuxhunywa ngokomzimba kumgca wokudansa.
Iidlo zokuDansa zelizwe
Awudingi ukugqoka njengenkwenkwezi ukuze ujabulele ukudansa kwelizwe, kodwa abantu abaninzi banokuziva bekhululekile ngokugqoka iigobotini zeenkomo okanye iinqayi kumgangatho wokudanisa. Izwe lasentshonalanga isambatho lihluka ngommandla, kodwa isiphakamiso sinye sibonakala siyinto yonke: sigqoke induduzo. Abadansi bembatha iingubo, i-slacks, iipketi, iipotton okanye iikisi zesilika, amabhuthi, izitya, kunye neentonga ze-cowboy. Zama ukunamathela kwiingubo ezingaqhelekanga ezivumela inkululeko yokuhamba. Izambatho ezinqabileyo zicetyiswayo, njengendawo yokudanisa ephakamileyo ziba zizinto ezincinci.
Ukufunda Indlela yokuDanisa uMdaniso
Ukudansa kwelizwe kuyanandipha emhlabeni jikelele nakwiimivalo zemidaniso, ezentlalo, kwiiklabhu zomdaniso kunye neeklasi. Iindibano ezininzi zokudanisa eziseNtshona-ntshona zinika izifundo zamahhala zabaqalayo, ngokuqhelekileyo ngokuhlwa. Hlola kunye neekholeji zendawo kunye neeyunivesithi zomdaniso welizwe okanye izifundo zokudanisa umgca, njengoko izikolo ezininzi zinemikhakha yokudansa kwi-campus. Xa ufumana izifundo ezimbalwa phantsi kwebhanti yakho, uya kuba nethemba elaneleyo ngobusuku bokudansa. Hlaziya kwaye ujabule ... ukhethe isitayela somdaniso esilula ukufunda, ukuzivocavoca kakhulu kunye nokuzonwabisa okumnandi.
I-Sexy, Hip Shaking Mambo Dance
Indlela yokwenza iSlideyidi se-Cha-Cha
Isikhokelo seMbali kunye nesimo seCapoeira
Funda i-Paso Doble Dance
Imbali kunye nesimo seWing Chun Kung Fu
Isikhokelo seMbali kunye nesimo se-Aikido
Imbali ye-Martial Art Style yaseJudo
Ubani OwaseMandulo waseRoma uJanus?
Ukuguqulela 'Ngoko' kwiSpeyin
Ngaba i-Oil ihamba nge-US Ukuhlasela kwe-Iraq?
Kunconywe njani-kwiincwadi zeGolati zabaQaleli